မြားများ: ဒီလိုမိန့်ရဲ့ ဇရတု သျှတြ
ဒီလိုမိန့်ရဲ့ ဇရတု သျှတြ
၁။ အသွင်ပြောင်းမှု သုံးရပ်
စိတ်ဓာတ်ရဲ့ အသွင်ပြောင်းမှု သုံးရပ်ကို ငါ သင်တို့ကို ပညတ်မယ်။ စိတ်ဓာတ်က ကုလားအုပ်၊ ကုလားအုပ်က ခြင်္သေ့၊ ခြင်္သေက နောက်ဆုံး သူငယ်ဖြစ်သွားပုံ ။
စိတ်ဓာတ်အတွက် ရိုသေမှုနေထိုင်ရာအားကြီး၊ ဝန်သယ်တဲ့ စိတ်ဓာတ်အတွက် လေးလံတဲ့ အရာ အများပဲ ရှိကြတယ်။ လေးလံတာနဲ့ အလေးလံဆုံး သူ့ခွန်အားကို တောင့်တ သကိုး။
ဘာလဲ လေးလံတာ ဝန်သယ်စိတ်ဓာတ်က မေးတယ်.ဒီနောက် ကုလားအုတ်လို ဒူးထောက်ကာ ကောင်းကောင်း ဝန်တင်ချင်တော့တယ်.။
ဘာလဲ အလေးလံဆုံးအရာ အသင်သူရဲကောင်းတို့တဲ့။ ဝန်သယ်စိတ်ဓာတ်က မေးတယ် ။ဒါမှ ငါ့အပေါ်တင် ငါ့ခွန်အားကို ဝမ်းမြောက်ရမှာ တဲ့။
ဒါမဟုတ်လား.။မိမိမာနကို ညှင်းဆဲဖို့ မိမိကိုယ်ကို နှိမ်တာ မိမိ ပညာကိုလှောင်ပြောင်ဖို့ မိမိ မိုက်မဲမှုကို ပြတာလား..။ဒါမှ မဟုတ် ဒါလား. အရေးတော် အောင်ပွဲခံတဲ့ အခါ အရေးတော်ကို စွန့်တာ ၊ သွေးဆောင်သူကို သွေးဆောင်ဖို့ တောင်မြင့်ကြီးတွေကို တက်တာလား..။
ဒါမှ မဟုတ် ဒါလား ။ အသိပညာ ဝက်သစ်ချသီနဲ့ မြက်စားဖို့ အမှန်တရားအတွက် စိတ်ဓာတ်ဆာလောင်မှု ခံစားဖို့လား..။ ဒါမှ မဟုတ် ဒါလား.။ ဖျားနာစဉ် နှစ်သိမ့်သူတွေ ပထုတ် ၊မိမိ တောင်းတာ ကြားမှာ မဟုတ်တဲ့ နားပင်းသူတွေနဲ့ မိတ်ဖွဲ့ဖို့လား ။ ဒါမှ မဟုတ်ဒါလား.။အမှန်တရားက ရေဖြစ်နေရင် ညစ်ပေတဲ့ ရေထဲဆင်း ဖားအေးတွေ ဖားပြုတ်ပူတွေကို မဆိုင်ကြောင်း မငြင်းတာလား.။ ဒါမှ မဟုတ် ဒါလား.။ကိုယ့်ကို စပ်ဆုပ်သူတွေကို ချစ်၊ ကိုယ့်ကို ခြောက်မယ့် သူရဲကို လက်ထုတ်ပေးဖို့လား.။
ဒီအလေးလံဆုံး အရာတွေကို ဝန်သယ်စိတ်ဓာတ်က တင်ယူကာ ကုန်တင်ပြီး ကန္တာရထဲ သုတ်ခြေတင်တော့တဲ့ ကုလားအုတ်လို စိတ်ဓာတ်လည်း မိမိ ကန္တာရထဲ သုတ်ခြေတင်တော့တယ်။
ဒါပေမယ့် အထီးကျန်ဆုံး ကန္တာ ရထဲမှာ ဒုတိယအသွင် ပြောင်းမှု ဖြစ်ပွားတော့တယ်.။ ဒီမှာ စိတ်ဓာတ်က ခြင်္သေ့ ဖြစ်သွားတော့တယ်.။ လွတ်လပ်မှု ဖမ်းယူမယ် ၊ မိမိ ကန္တာရထဲမှာ အရှင် သခင်အဖြစ် ခံယူမယ်။
သူ့နောက်ဆုံး အရှင်ကို ဒီမှာ သူရှာမယ်.။ ရန်မူမယ် . သူ့နောက်ဆုံး ဒေဝကို ရန်မူမယ် ။ အောင်ပွဲအတွက် နဂါးကြီးနဲ့ တိုက်ပွဲ ဝင်လိမ့်မယ်.။ စိတ်ဓာတ်က အရှင်လို့ ဒေဝကို မခေါ်ချင်တဲ့ နဂါးကြီးက ဘာလဲ။ အသင်ပြုရမည်လို့ နဂါးကြီးက အမည်တွင်တယ် ။ ဒါပေမယ့် ခြင်္သေ့ စိတ်၊တ်ကတော့ ငါပြုမည်တဲ့။
အသင် ပြု၇မည် လမ်းပေါ်မှာ ရှိနေတယ်။ ရွှေရောင် တဖိတ်ဖိတ် အကြေးလွှမ်း တိရိစ္ဆာန် ။ အကြေးတိုင်းမှာ ရွှေရောင် တဖိတ်ဖိတ်နဲ့က အသင် ပြုရမည်တဲ့။နှစ်ပေါင်း တထောင်ရဲ့ အကြေးပေါ်မှာ တဖိတ်ဖိတ်ပ။ ဒီလိုပြောရဲ့ ..နဂါးအားလုံးမှာ အင်အားအကြီးဆုံး နဂါးက အရာတို့ရဲ့ တန်ဖိုးအားလုံး ငါ့အပေါ် တဖိတ်ဖိတ်။ တန်ဖိုးအားလုံးကို ဖန်ဆင်းပြီးပါပြီ။ ဖန်ဆင်းထားတဲ့ တန်ဖိုးအားလုံး ငါ ကိုယ်စားပြုတယ် ။ တကယ်ပဲ ငါပြုမယ် မရှိစေရတော့တဲ့။ ဒီလိုဆိုရဲ့ နဂါးက…
ငါ့ ညီနောင်တို့ အဘယ့်ကြောင့် စိတ်ဓာတ်က ခြင်္သေ့ လိုအပ် သလဲ ။ တောထွက်တဲ့ လေးစားတတ်တဲ့ ဝန်တင် တိရိစ္ဆာန်နဲ့ ဘာကြောင့် မလုံလောက်ရပါသလဲ.။
တန်ဖိုးသစ် ရခွင့် ရှိရမယ် ယူဆတာ ဒါဝန်တင်တဲ့ လေးစားတတ်တဲ့ တိရိစ္ဆာန်အဖို့ ဖြုံလောက်စရာ ယူဆချက်ပါပဲ .။ တကယ်ပဲ ဒီလိုစိတ်ဓာတ်မျိုးကို သူလိုက်ဖမ်းစားနေတယ်..။ ဖမ်းစား တိရိစ္ဆာန်ရဲ့ အလုပ်ကိုရောပ ။
အမွန်မြတ်ဆုံး အဖြစ် တခါက အသင်ပြုရမည်ကို ချစ်ခဲ့တယ်.။ အခုတော့ အမွန်မြတ်ဆုံး အက္ခရာတွေ မှာတောင် လှည့်စားမှုနဲ့ ထင်ရာ မြင်ရာ ဖြစ်နေမှုကို တွေ့ရတော့တယ်။ မေတ္တာကနေ လွတ်လပ်မှု ဖမ်ယူဖို့ပဲ.။ဒီလို ဖမ်းယူဖို့ အတွက် ခြင်္သေ့ လိုအပ်တယ်။
ဒါပေမယ့် ပြောပါ ငါ့ ညီနောင်တို့ ။ ခြင်္သေ့ မလုပ်နိုင်တာ ဘာကို သူငယ်လုပ်နိုင်သလဲ.။ ဘာကြောင့် အမဲလိုက် ခြင်္သေ့ဟာ သူငယ် ဖြစ်ရဦးမှာလဲ.။ အပြစ်ကင်းမှု သူငယ်ဟာ မေ့တတ်ခြင်း၊ အစသစ်၊ ကစားပွဲ၊ အလိုလို လိမ့်တဲ့ ဘီး၊ ပထမ လှုပ်ရှားမှု မွန်မြတ်တဲ့ ဟုတ်ကဲ့…..။
အင်း..ဖန်ဆင်းတဲ့ ကစားပွဲ အတွက် ငါ့ ညီနောင်တို့ ဘဝမှာ မွန်မြတ်တဲ့ ဟုတ်ကဲ့ လိုနေတယ်။ သူပိုင် လိုအင်ကို ခု စိတ်ဓာတ်က လိုနေတယ်။ သူပိုင် လောက က လောကရဲ့ အပယ်ခံ ကို အောင်နိုင်တယ်။
စိတ်ဓာတ်ရဲ့ အသွင်ပြောင်းမှု သုံးရပ်ကို ငါ သင်တို့ကို ပညတ်ခဲ့ပြီ။ စိတ်ဓာတ်က ကုလားအုတ်၊ ကုလားအုတ်က ခြင်္သေ့၊ ခြသေ့င်္က သူငယ်ဖြစ်သွားပုံ။
ဒီလိုမိန့်ရဲ့ ဇရတုသျှတြ။ ဒီလိုအချိန်မှာ ငါဟာ နွားပြောက်လို့ ခေါ်တဲ့ မြို့မှာ နေထိုင်တယ်။
၂။ သီလအကြောင်း သုခမိန် ကုလားထိုင်
လူများက ဇရတုသျှတြလို့ ပညာရှိ တယောက်အကြောင်း ချီးကျူးပြောကြတယ်။ အအိပ်နဲ့ သီလအကြောင်း ကောင်းကောင်း ဟောပြောနိုင်တဲ့ သူတဲ့.။ ဒီအတွက် သူ့ကို လေးစားကြ၊ ကျော်ကြားသမို့ လူငယ်အားလုံး သူ့ ကုလားထိုင်ရှေ့ ထိုင်ကြတယ်.။သူ့ဆီ ဇရတု သျှတြ သွားတယ်.။သူ့ကုလားထိုင်ရှေ့က လူငယ်တွေကြားထိုင်လိုက်တယ်။ ဒီလိုမိန့်ရဲ့ ပညာရှိ …
အိပ်ခြင်းရှေ့မှာ လေးစားမှု သင့်တင့်မှု ရှိပါ။ ဒါပထမ အချက်ပဲ။ ကောင်းကောင်း မအိပ်သူတွေ ညမှာ အိပ်မပျော်သူတွေ အားလုံး ဝေးဝေးက ရှောင်ကြဖို့ ဖြစ်တယ်.။ အိပ်ခြင်းရှေ့မှာ သူခိုးတောင် သင့်တင့်ရုံပဲ.။ တညလုံး သူညင်ညင်သာသာပဲ ခိုးတယ်.။ ဒါပေမယ့် ညစောင့်ကတော့ တော်ရုံ သင့်ရုံ မဟုတ်ဘူး.။ သူ့ခရာကြီးကို ကိုင်ထားပုံ တော်ရုံ သင့်ရုံ မဟုတ်ဘူး.။
အိပ်ခြင်းဟာ သေးတဲ့ အနုပညာ မဟုတ်ဘူး.။ဒီရည်မှန်းချက်အတွက် တနေလုံး မအိပ်ဘဲ နေဖို့ လိုတယ်.။တနေ့ ဆယ်ကြိမ် အသင့်ကိုယ်ကို အနိုင်ယူရမယ်။ဒါကသင့်လျော်တဲ့ နွမ်းနယ်မှု ဖြစ်စေတယ်.။ငါ့ဝိဥာဉ်အဖို့ ဘ်ိန်းပင်ပါပဲ .။
တနေ့ ဆယ်ကြိမ် အသင့်ကိုယ်နဲ့ ပြန်ပေါင်းထုပ်ရမယ်.။ အနိုင်ယူတာ ခါးသီးမှုပဲ.။ပြန်ပေါင်းမထုပ်သူ ကောင်းကောင်း မအိပ်ရဘူး.။
အမှန်ဆယ်ပါးကို နေ့အတွင်း အသင်တွေ့ရမယ်.။ နို့မို့ရင် ညအတွင်း အမှန်ကို ရှာမိမယ်.။ သင့်ဝိဥာဉ် ဆာလောင် နေပေလိမ့်။ ဆယ်ကြိမ် နေ့အတွင်း အသင် ရယ်မောရမယ်.။ ရွှင်လန်းရမယ်။ နိူ့မို့ရင် အနာရောဂါရဲ့ ဖခင် သင့်ဝမ်းဗိုက်က ညမှာ နှောင့်ယှက်လိမ့်မယ်.။
သိသူ မရှိသလောက်ပဲ။ ကောင်းကောင်း အိပ်နိုင်ဖို့ သီလအားလုံးစောင့်ရမယ်.။ငါ မမှန်သက်သေ ထွက်မှာလား.။ ငါ ကာမေသု ကျူးလွန်မှာလား.။
ငါ အိမ်နီးချင်းရဲ့ အိမ်ဖော်မလေးကို အငမ်းမရတောင့်တနေမှာလား..။ဒါတွေ အားလုံး အိပ်ကောင်းခြင်းကို မအိပ်ရစေဘူး.။သီလတွေ အကုန် ပြည့်နေတာတောင် လိုအပ်တာ တခု ရှိနေသေးတယ်..။ သီလတွေ အကုန်လုံးကို တချိန်ကျရင် အအိပ်ခိုင်းရမယ်.။
သူရုိ့ အချင်းချင်းရန်မဖြစ်ကြစေနှင့် မချောတွေ။ ပြီး သင့်အကြောင်း မဖြစ်စေနှင့် အသင် ကံဆူိုးသူကြီးရေ ။ ဝေဒနဲ့ သူ့အိမ်နီးချင်း ငြိမ်းချမ်းပါစေ.။ အိပ်ကောင်းခြင်းက ဒါလိုတယ် .။အိမ်နီးချင်းရဲ့ သရဲလည်း ငြိမ်းချမ်းပါစေ.။ နို့မို့ ရင် ညကျ သင့်ကို လာခြောက်လိမ့်မယ်.။
အစိုးရကို လေးစားပါ လိုက်နာပါ.။
သိုးတွေကို အစိမ်းဆုံး စားကျက်ဆီကို ခေါ်ဆောင်သွားတာဟာ ငါ့အဖို့ အကောင်းဆုံး သိုးထိန်း အမြဲ ဖြစ်လိမ့်မယ်.။ဒါလည်း အိပ်ကောင်းခြင်း အိပ်ရမယ့် အကြောင်းပါပဲ..။
ဂုဏ်အများကြီး ငါမလိုချင်.။ ဥစ္စာအများကြီးလည်း ငါမလို .။သရက်ရွက်ကို လှုပ်ရှားစေတယ်.။ ဒါပေမယ့် နာမည်ကောင်း တခု ဥစ္စာ အနည်းအပါး မရှိလည်း ကောင်းကောင်း မအိပ်ရဘူး.။
အပေါင်းအသင်းဆိုးထက် အပေါင်းအသင်း နည်းနည်းပဲ ပိုလိုလားတယ်.။ဒါပေမယ့် သူတို့ အချိန်နဲ့ သွားတတ် လာတတ်ရမယ်.။ဒါမှ ကောင်းကောင်း အိပ်ရမှာ.။ အင်း စိတ်ဓာတ်ဆင်းရဲ သူတွေကိုလည်း ငါသဘောကျပါရစေ.။သူတို့ အိပ်ခြင်းကို ငါ အားပေးတယ်.။မင်္ဂလာ ရှိစွ သူတို့၊ အထူးသဖြင့် ကိုယ်က သူတို့ကို အလျှော့ပေးရင်ပလေ.။
ဒီလို ကုန်လွန်ရဲ့ နေ့ဟာ သီလ ရှိသူမှာ.။ညေ၇ာက်တော့ ငါ့အအိပ်ကို ဆင့်မခေါ်မိစေဖို့ သတိကောင်းကောင်းထားတယ်.။ သူက ဆင့်ခေါ်တာ မကြိုက်ဘူး.။သီလတို့ အရှင်သခင် အအိပ်က..
ဒါပေမယ့် နေ့တုန်းက လုပ်ခဲ့ တွေးခဲ့တာ ငါတွေးတယ်.။ ဒီလို ပြန်တွေးရင် နွားမလို စိတ်ရှည်တာ.။ကိုယ့်ကို မေးတယ်.။သင့် အနိုင်ယူမှု ဆယ်ခုက ဘာတွေလဲ.။
ဘာတွေနဲ့ ပြန်ပေါင်းထုပ်မှု ဆယ်ခု၊ အမှန်တရားဆယ်ခု.။ ငါ စိတ်ကြည်ခဲ့ရတဲ့ အရယ်အမော ဆယ်ခု။
ဒီလိုတွေးနေခိုက် အတွေးလေးဆယ်က ပုခက်လွှဲလို့မို့.။သူ ငါ့ဆီ ချက်ချင်းပဲ ဆိုက်လာတော့တယ်.။အအိပ်ဆိုတဲ့ အဆင့်မခံတဲ့ သီလအားလုံးရဲ့ အရှင်သခင်က ..။
အအိပ် ငါ့မျက်လုံးကိုခေါက်တယ်.။ လေးလံသွားရော.၊ အအိပ် ငါ့ပါးစပ်ကို လာထိရော..ပွင့်ထွက်သွားရော.။
တကယ်ပဲ ခြေဖဝါးနုနုနဲ့ သူ ငါ့ဆီလာတာ။ သူခိုးတွေထဲမှာ အချစ်ရဆုံးက ပြီး ငါ့အတွေးတွေ ခိုးယူတာ.။အူတူတူနဲ့ ငါရပ်နေမိ..။ဒီသုခမိန် ကုလားထိုင်လိုပ။
ဒါပေမယ့် ဒီနောက် ငါကြာကြာ မရပ်နိုင်ချေဘူး.။ငါ လဲလျောင်း.။
ဇရတု သျှတြဟာ အဘိုးအို ဒီလိုပြောတာကြားတော့ စိတ်ထဲ ရယ်မိတယ်.။ အလင်းတခု သူ့မှာ ဝင်လာသကိုး.။ ဒါနဲ့ ဒီလို သူ့စိတ်ထဲ ပြောမိရဲ့.။ အတွေးလေးဆယ်နဲ့ ဒီအဘိုးအို သူရူးနဲ့ တူရဲ့.။ဒါပေမယ့် အိပ်နည်းတော့ သူကောင်းကောင်း သိတယ်လို့ ငါယုံတယ်.။
ချမ်းသာစွ .။ ဒီပညာရှိအနီး နေထိုင်သူ.။ဒီလို အအိပ်မျိုးက ကူးစက်တတ်တယ်.။နံရံ ထူထူ ထွင်းဖောက်လို့တောင် ကူးစက်တတ်တယ်.။ သူ့ သုခမိန် ကုလားထိုင်မှာတောင် မှော်ရှိတယ်.။ သီလ ဟောပြောသူကြီး ရှေ့မှာ လူငယ်တွေ ထိုင်နေကြတာ..။ အချည်းနှီး မဟုတ်ချေဘူး.။
သူ့ပညာက ကောင်းကောင်း အိပ်နိုင်ဖို့ မအိပ်ဘဲ နေရေးဖြစ်တယ်.။တကယ်ပဲ ဘဝမှာ အဓိပ္ပါယ် မရှိရင် ငါလည်း အဓိပ္ပါယ်မဲ့ကို ရွေးချယ်မယ်.ဆိုရင် ငါ့အဖို့ အလိုလားအပ်ဆုံး အဓါပ္ပါယ်မဲ့ ဖြစ်စေလိမ့်မယ်.။
လူတွေ သီလအကြောင်း ဟောပြောသူ ရှာကြတဲ့ အခါ.အခြားအရာ အားလုးံထက် ဘာကို အရင် ရှာကြသလဲ။ အခု ငါကောင်းကောင်း သိပေါ့.။ သူတို့ ရှာကြတာ မိမိတို့ အ်ိပ်ကောင်းခြင်း အိပ်ရေး.။အအိပ်ကို အားပေးတဲ့ ဘိန်းပင် ဦးခေါင်းသီလတွေ ရရေးပဲ..။
ဒီသုခမန် ကုလားထိုင်က ချီးကျူးခံ ပညာ ရှိတွေ အားလုံး အဖို့.။ပညာဆိုတာ အိပ်မက်မပါ အိပ်ရေးပဲ.။ ဘဝရဲ့ ပိုမြင့်မားတဲ့ အဓိပ္ပါယ် သူတို့ မသိကြဘူး.။
အခုတောင် ဒီ သီလအကြောင်း သွန်သင်သူကြီးလို လူအချို့၊ သူ့လောက်တောင် အလေးစားမခံရတဲ့ လူအချို့ ရှိနေတာ..သေချာတယ်.။ဒါပေမယ့် သူတို့ခေတ်ကုန်ပြီ..။သူတို့ သိပ်ကြာကြာ မရပ်တည်ကြ.။အခုပဲ လဲလျောင်းနေကြပေါ့။
မင်္ဂလာ ရှိစွ အဲဒီ ငိုက်မျဉ်းသူတွေ ၊ အကြောင်းမူကား သူတို့ မကြာခင် ခေါင်းငိုက် အိပ်ပျော်ကြရကုန်အံ့။
ဒီလို မိန့်ရဲ့ ဇရတုသျှတြ.။ ။
တခါတော့ ဇရတုသျှတြလည်း နောက်ဖေးလောကသား အားလုံးနည်းတူ လူကို ကျော်ကာ စိတ်ကူးဖြန့်ဖူးရဲ့ ။ဒုက္ခခံစား အနှိပ်စက်ခံ ဒေဝတပါးရဲ့ လက်ရာလို့ ကမ္ဘာလောက အဲဒီတုန်းက ငါ့အဖို့ ထင်ရရဲ့.။
ဒေဝတပါးရဲ့အိပ်မက်(ပြီး.စကားသုံးလို့)ကမ္ဘာလောကဟာအဒီတုန်းက ငါ့အဖို့ ထင်ရရဲ့။နတ်ဆန်ဆန် မကျေနပ်ဖြစ်နေသူတပါးရဲ့ မျက်လုံးတွေ ရှေ့က
အကောင်းနဲ့ အဆိုး ပျော်ရွှင်မှုနဲ့ ဝမ်းနည်းမှု ငါနဲ့ အသင် ရောင်စုံ ရေခိုးရေငွေ့တွေလို့.ဖန်ဆင်း မျက်လုံးရှေ့ ငါ့အဖို့ ထင်ရရဲ့.။ဖန်ဆင်းသူက မိမိရှေ့က ခွာကြည့်လိုတယ်.။ဒါနဲ့ သူ ကမ္ဘာကို ဖန်ဆင်းတယ်.။
မိမိဒုက္ခကိုခွာ မိမိကိုယ်ကို မေ့ရတာ ဒုက္ခခံစားရသူအဖို့ ရီဝေဝေ ပီတိပေပဲ.။ ရီဝေပီတိနဲ့ မိမိ ကိုယ်ကို မေ့ခြင်းလို့ လောကဟာ တခါက ငါ့အဖို့ ထင်ရရဲ့။ ဒီကမ္ဘာ ထာဝရ မပြည့်စုံ၊ ထာဝရ ပဋိပက္ခရဲ့ နိမိတ်ပုံ.(မပြည့်စုံတဲ့ ဖန်ဆင်းသူအဖို့ ရီဝေဝေ ပီတိ) ဒီလိုပဲ လောကဟာ တခါက ငါ့အဖို့ ထင်ရတယ်.။
သြော် အသင်ညီနောင်တို့ ငါဖန်ဆင်းလိုက်တဲ့ ဒေဝက ဒေဝအားလုံးနည်းတူ လူလုပ်တာ လူရူးတာပါပဲ ကလား…။ လူပါပဲ.။လူနဲ့ အတ္တရဲ့ သနားစရာ အစိတ်အပိုင်းကလေးမျှ ၊ ငါ့ပြာတွေနဲ့ အလင်းထဲကနေ ငါ့ဆီလာတာပဲ ဒီတစ္ဆေ ။ တကယ်တော့ သူ ဟိုဘက်ဆီကနေ သူ ငါ့ဆီ လာတာ မဟုတ်ချေဘူး.။
ဘာဖြစ်ပွားခဲ့လဲ ငါ့ ညီနောင်တို့.၊ဒုက္ခခံနေသူ ငါ့ထက် ငါက သာလွန်တာပ.။ငါ့ ပြာတွေကို တောင်ပေါ် သယ်သွားတယ်.။ပိုမိုတောက်ပတဲ့ အလင်း ငါ့ကိုယ်ငါ စီရင်တယ်.။ကြည့်စမ်း.ဒီတင် တစ္ဆေ ငါ့ဆီက ထွက်ခွာသွားတော့တယ်.။
နာလန်ထ ငါ့ အဖို့ အခုလို ဒီလိုတစ္ဆေတွေကို ယုံဖို့ရာ ဒုက္ခဆင်းရဲပဲ.။ညှဉ်းဆဲတာပဲ ဖြစ်လိမ့်မယ်.။ငါ့အဖို့ ခု ဒုက္ခဆင်းရဲပဲ ဖြစ်မယ်.။အရှက်ရတာပဲ.။ဒီလိုပြောတာပဲ ငါ့ နောက်ဖေးလောကသားတွေကို.။
ဆင်းရဲ ဒုက္ခပါပဲ၊ အစွမ်းမဲ့ခြင်းပါပဲ..။နောက်ဖေးလောက အားလုံးကို ဖန်ဆင်းခဲ့တာ.။ပြီး သုခဆိုတာ တိုတောင်းတဲ့ ရူးသွပ်မှု၊ ဒါကို ဒုက္ခခံစားရဆုံးသူမှ သိတာ..။
တခုတည်းနဲ့ အသေ တခုတည်းနဲ့ အန္တိမဆီရောက်လိုတဲ့ နွမ်းနယ်မှု။ နောက်ထပ်ဆန္ဒပြူဖို့တောင် ဆန္ဒ မရှိတော့တဲ့ သနားစရာ မသိတဲ့ နွမ်းနယ်မှု၊ ဒါက ဒေဝနဲ့ နောက်ဖေးလောကအားလုံးကို ဖန်ဆင်းခဲ့ရဲ့..။
ငါ ပြောတာ ယုံကြ ငါ့ညီအစ်ကိုတို့.။ကိုယ့်ကို စိတ်ပျက်တာ ကိုယ်ပဲ ဖြစ်တယ်.။တစွဲလမ်းလမ်း စိတ်ဓာတ်ရဲ့ လက်ချောင်းတွေနဲ့ အန္တိမ နံရံတွေကို စမ်းခဲ့တယ်.။ ငါပြောတာ ယုံကြ ငါ့ ညီအစ်ကိုတို့..ကမ္ဘာမြေကို စိတ်ပျက်တာ ကိုယ်ပဲ ဖြစ်တယ်.။ဘဝရဲ့ အူသိမ်အူမတွေ သူတို့ စကားပြောတာ ကြားခဲ့တယ်.။
အဲဒီနောက် အန္တိမ နံရံတွေထဲကို ခေါင်းနဲ့ (ခေါင်းတင်မကသေး) ဖောက်ကာ ပရလောကထဲ ဝင်သွားဖို့ အားထုတ်တယ်.။ဒါပေမယ့် အဲဒီ ပရလောက ကလည်း လူ့ဆီက ဖုံးကွယ်ထားတယ်.။ဒီလူဟန်ဆောင်တဲ့ လူမဆန်တဲ့ လောက၊ ကောင်းကင်ဘုံ သုည၊ ဘဝ အူသိမ်အူမတွေ လူကူုို စကား မပြောကြဘူး.။ လူလိုကလွဲလို မပြောကြဘူး.။
အင်း ပဋိပက္ခနဲ့ ရှုပ်ထွေးမှုပါတဲ့ ဒီငါကောင်ဟာ မိမိဘဝကို အဖြောင့်မတ်ဆုံး ပြောဆိုတယ်.။ဒီဖန်ဆင်းတဲ့၊ ဆန္ဒပြူတဲ့၊ တန်ဖိုးဖြတ်တဲ့၊ ငါကောင် အရာတို့ အတိုင်းအတာနဲ့ တန်ဖိုးဖြတ်တဲ့ ငါကောင်..။
ဒီအဖြောင့်မတ်ဆုံးဘဝ ဒီငါကောင်က ကိုယ့် အကြောင်းပြောတယ်.။ပြန်တွေး မြည်တမ်း။ တောင်ပံကျိုးခတ်တော့တောင် ကိုယ့်ကို ညွှန်းတယ်..။အမြဲ ပိုဖြောင့်မတ်စွာ စကားပြောတတ်လာတယ်.။ဒီငါကောင် တက်လာလေလေ ဒီကမ္ဘာမြေအတွက် ဘွဲ့တွေ ဂုဏ်ပုဒ်တွေ တွေ့လာလေလေဖြစ်တယ်.။
မာနသစ်တခု ငါ့ကို သင်ပြရဲ့ ငါ့အတ္တက။ ငါက ဒါကို လူတွေကို သင်ပြတယ်.။မိမိခေါင်းကို ကောင်းကင်ဘုံ အရာတွေရဲ့ သဲထဲမလွှင့်ပစ်မိဖို့.။လွတ်လွတ်လပ်လပ် သယ်ဖို့.။ကမ္ဘာမြေက ခေါင်းက ၊ ဒါက ကမ္ဘာမြေကို အဓိပ္ပါယ်ပေးတယ်.။
ဆန္ဒသစ် သင်ပြရဲ့ ငါ လူတွေကို ။ လူမမြင်မကမ်း လိုက်ခဲ့တဲ့ လမ်းကို ရွေးဖို့ ထောက်ခံဖို့.။နာဖျားသူတွေ သေကြေသူတွေလို ဒီက ဘေးထွက်မလစ်ဖို့.။
နာဖျားသူတွေ သေကြေသူတွေ သူတို့ပါပဲ ။ကိုယ်နဲ့ ကမ္ဘာမြေကို စပ်ဆုတ်တာ.။ကောင်းကင်လောကတို့ ရွေးနှုတ်တဲ့ သွေးစက်တို့ကို တီထွင်ကြတာ.။ဒါပေမယ့် ဒီချိုမြ လွမ်းဆွတ် အဆိပ်တွေတောင် ကိုယ်နဲ့ ကမ္ဘာမြေဆီက ချေးငှားကြတာ..။
သူတို့ ဒုက္ခတွေဆီက ထွက်ပြေးဖို့ ရှာရာ ကြယ်တွေက ဝေးလွန်းတယ်.။ဒီတော့ သူတို့ သက်ပြင်ချတယ်.။ သြော်..နောက်ဘဝထဲ ချမ်းသာသုခထဲ လစ်ပြေးစရာ ကောင်းကင်းလမ်းတွေ ရှိရင် ကောင်းမှာ.တဲ့…။
မိမိတို့ ကိုယ်နဲ့ ဒီကမ္ဘာမြေကို ကျော်လွန်ပြီး မိမိတို့ ပို့ဆောင် ခံကြရပြီလို့ စိတ်ကူးယဉ်ကြတယ်.။ဒီကျေးဇူးကန်းတွေ ဒါပေမယ့် သူတို့ အပို့ခံရပြီး ပျော်တာ ကြည်နူးရတာ ဘာရဲ့ ကျေးဇူးလဲ။ သူတို့ ကိုယ်နဲ့ ကမ္ဘာမြေပဲပေါ့.။
ဇရတုသျှတြဟာ ချူချာသူတွေအပေါ် နူးညံ့ပါရဲ့။ တကယ်ပဲ သူတို့ နှစ်သိမ့်ပုံ ကျေးဇူး မသိတတ်ပုံတို့ကို ဒေါသ မဖြစ်ပါဘူး.။နာလန်ထတွေ အနိုင်ရကြသူတွေ ဖြစ်ကြပါစေ.။ မိမိတို့ဖို့ ပိုမြင့်မားတဲ့ ကိုယ်တွေ ဖန်ဆင်းနိုင်ကြပါစေ.။
မိမိလှည့်စားချက်ကို ကြင်ကြင်နာနာကြည့်ပြီး.သန်ခေါင်းယံမှာ မိမိ ဒေယရဲ့ သင်္ချီုင်းတဝိုက် လစ်ထွက်တဲ့ နာလန်ထတွေကိုလည်း ဇရတု သျှတြ ဒေါသ မဖြစ်ပါဘူး.။ ဒါပေမယ့် သူ့မျက်ရည်ထဲမှာ နာဖျားမှု၊ နဲ့တဲ့ ဖျားနာကိုယ် ကျန်နေသေးတယ်.။
တွေးကြံသူ ဒေဝအတွက် နွမ်းလျသူတို့ အထဲမှာ ချူချာသူ အများပါတယ်.။သူတို့က သိမြင်တတ်သူတို့ကို နောက်ဆုံးပေါ် သီလဆိုတဲ့ ဖြောင့်မတ်မှုကို မုန်းကြတယ်.။
နောက်ပြန်လှည့်ကာ သူတို့ အမှောင်ခေတ်တွေဆီ ငေးကြတယ်.။အဲဒီတုန်းက လှည့်စားချက်တို့ ယုံကြည်မှုတို့က ခုလို မဟုတ်ဘူး.။ဆင်ခြင်တုံတရားကို ဆဲရေးတိုင်းထွာတာ.ဒေဝနဲ့ တူတာ ဒုစရိုက်။
ဒီနတ်တူ လူတွေကို ငါကောင်းကောင်း သိပေရဲ့။ သူတို့ အတင်း အကျပ် အယုံခိုင်းတယ်.။သံသယဝင်တာ ဒုစရိုက်တဲ့.။သူတို့ကိုယ်တိုင် အယုံဆုံးဆိုတာ ငါကောင်းကောင်း သိရဲ့။
တကယ်ပဲ နောက်ဖေးလောကသားတွေ ကယ်နှုတ်တဲ့ သွေးစက်တွေ မဟုတ်ဘူး.။ကိုယ်ပါ သူတို့ အယုံဆုံးက သူတို့ ကိုယ်ကပဲ သူတို့ အဖို့ အရာထဲက အရာပါ.။ဒါပေမယ့် ဒါ သူတို့ အဖို့ ချူချာချာ အရာ တခု ဖြစ်နေတယ်.။သူတို့ အရေခွံထဲက ဝမ်းမြောက် ဝမ်းသာ ထွက်လိုကြတယ်.။ဒါကြောင့် သေခြင်းတရား ဟောပြောသူတွေ ပြောတာကို နားဆင်ကြတယ်.။သူတို့ ကိုယ်တိုင်လည်း နောက်ပြန် သင်ပြကြတယ်.။
နားဆင်ကြ ..ငါ့ညီအစ်ကိုတို့. ကျန်းမာတဲ့ ကိုယ့်ရဲ့ အသံကို (နားဆင်ကြ)။ ပိုဖြောင့်မတ် သန့်စင်တဲ့ အသံ ဖြစ်တယ်.။
ပိုဖြောင့်မတ်စွာ သန့်စင်စွာ ကျန်းမာတဲ့ ကိုယ်က ပြောကြားတယ်.။ပြည့်စုံတယ် တုတ်ခိုင်တယ်။ ကမ္ဘာမြေရဲ့ အဓိပ္ပါယ်အကြောင်း ပြောကြားတယ်.။
ဒီလို မိန့်ရဲ့ ဇရတု သျှတြ။ ။
၄။ ကိုယ်ကို စပ်ဆုပ်သူများ.
ကိုယ်ကို စက်ဆုပ်သူများကို ငါ စကားပြောမယ်.။သူတို့ကို အသစ်လည်း. မသင်ယူစေချင်။ အသစ်လည်း မသင်ပြလို၊ မိမိကိုယ်ကို ခွဲခွာ နှုတ်ခွန်းဆက်ဖို့ ဒီလိုနဲ့ ဆွံ့အဖို့ ငါပြောလိုရဲ့..။
ကိုယ်ပဲ ငါ ၊ပြီး ဝိဥာဉ် ။ ဒီလိုဆိုရဲ့ သူငယ်..ဘာကြောင့် ကလေးများလို စကား မ ပြောရမှာလဲ.။
ဒါပေမယ့် နိုးထသူ သိသူက ပြော၇ဲ့။ ကိုယ် လုံးဝ ဖြစ်ရဲ့ ငါ.။ဘာမှ မပိုဘူး.။ဝိဥာဉ်ဟာ ကိုယ်ထဲက တစုံ တရာရဲ့ အမည်သာ ဖြစ်ရဲ့…တဲ့။
ကိုယ်ဟာ ဥာဏ်ကြီး တခု ၊ အဓိပ္ပါယ် တခုရဲ့ ပစ္စည်း.၊ စစ်နှင့် ငြိမ်းချမ်းရေ၊ သိုးအုပ်နဲ့ သိုးထိန်းသာ ဖြစ်ရဲ့.။ သင့်ကိုယ်ရဲ့ ကိရိယာ တခုဟာ သင့် ဥာဏ်ကလေးလည်း ဖြစ်တယ်.။ငါ့ညီနောင်..သင်က စိတ်ဓာတ်လို့ ခေါ်သည်။ သင့်ဥာဏ်ကြီးရဲ့ ကိရိယာနဲ့ ကစာစရာ.။
ငါကောင်. အသင်ပြောပြီး ဒီစကားလုံးကို ဂုဏ်ယူနေရဲ့.။ဒါပေမယ့် ပိုကြီးမားတဲ့ အရာက (သင်က မယုံလိုဘူး) ဥာဏ်ကြီးပါတဲ့ ကိုယ်ပဲ.။ငါလို့ မပြောဘူး လုပ်တယ်။
က္ကန္ဒြိယက ခံစားတာ.။ စိတ်ဓာတ်က သိမြင်တာ။ သူ့ဟာနဲ့ သူတော့ အဆုံး မရှိဘူး.။ဒါပေမယ့် က္ကန္ဒြိယနဲ့ စိတ်ဓာတ်တို့ကတော့ သူတို့ဟာ အရာအားလုံးရဲ့ အဆုံးလို့ တိုက်တွန်းပေလိမ့်မယ်။ ဘဝင်မြင့်လိုက်ကြတာ.။
ကိရိယာနဲ့ ကစားစရာတွေပဲ က္ကန္ဒြိယနဲ့ စိတ်ဓာတ်တို့က ။သူတို့ နောက်မှာ အတ္တရှိသေးတယ်.။အတ္တက က္ကန္ဒြိယရဲ့ မျက်လုံးများနဲ့ ရှာတယ်.။စိတ်ဓာတ်ရဲ့ နားများနဲ့လည်း နားထောင်တယ်.။
အမြဲ နားဆင်တယ်။အတ္တက ရှာတယ်.။နှိုင်းယှဉ်တယ်.။ပိုင်နိုင်အောင်လုပ်တယ်.။အောင်နိုင်တယ် ဖျက်ဆီးတယ်.။ ငါကောင်ကို စိုးမိုးသူ ဖြစ်တယ်.။ သင့်အတွေးတွေ ခံစားမှုတွေ နောက်မှာ ငါ့ ညီအစ်ကိုရေ..ကြီးမားတဲ့ အရှင် သခင် မသိရတဲ့ ပညာရှိ ရှိတယ်.။အတ္တလို့ ခေါ်တယ်.။သင့်ကိုယ်ထဲမှာ နေတယ်.။သင့် ကိုယ် ဖြစ်တယ်.။
သင့် အကောင်းဆုံး ပညာမှာထက် သင့်ကိုယ်ထဲမှာ ဥာဏ်ပိုရှိတယ်.။ဒီတော့ ဘာကြောင့် သင့်ကိုယ်က သင့် အကောင်းဆုံး ပညာရှိကို လိုသလဲ ဘယ်သူမသိမလဲ.။
အတ္တက သင့် ငါကောင်ကို သူခုန်ပေါက် ဆော့တာကို ရယ်တယ်.။ဒီခုန်ပေါက်တာတွေ တွေးကြံတာတွေ ငါ့အဖို့ ဘာလဲ. လို့.သူ့ဟာသူ ပြောတယ်.။ ငါ့ရည်ရွယ်ချက်မှာ နယ်တနယ်ပဲ.၊ ငါဟာ ငါကောင်ရဲ့ ခေါင်းဆောင်ကြိုး.သူ့ အယူအဆတွေကို စာထောက်ဖြစ်တယ်.တဲ့။
အတ္တက ငါကောင်ကို ပြောတယ်.။နာကျင်မှု ခံစား တဲ့။ အဲဒီတင် ဒုက္ခခံစားပြီး.ဘယ်လို အဆုံးသတ်ရမလဲ စဉ်းစားတယ်။ ဒီအတွက်ပဲ စဉ်းစားရတာ ဖြစ်တယ်.။
အတ္တက ငါကောင်ကိုပြောတယ်.။သုခ ခံစား တဲ့..။အဲဒီတင် ပျော်ရွှင်ပြီး..ဘယ်လို ခဏခဏ ပျော်ရွှင်ရမလဲ စဉ်းစားတယ်.။အဲဒီအတွက်ပဲ စဉ်းစားရတာ ဖြစ်တယ်။
ကိုယ်ကို စက်ဆုပ်သူတို့ကို ငါ စကားတခွန်းပြောမယ်.။ သူတို့ စက်ဆုပ်တာကို သူတို့ အထင်ကြီးမှုက ဖြစ်စေတာ.။အထင်ကြီးတာနဲ့ စက်ဆုပ်တာ ၊ ထိုက်တန်တာနဲ့ ဆန္ဒ ရှိတာ ဖြစ်စေတာ ဘာလဲ.။
ဖန်ဆင်းတဲ့ အတ္တက အထင်ကြီးတာ.။စက်ဆုပ်တာကို မိမိအတွက် ဖန်ဆင်းခဲ့တယ်.။ဝမ်းသာမှု ၊ ဝမ်းနည်းမှုတို့ကို မိမိအတွက် ဖန်ဆင်းခဲ့တယ်.။ဖန်ဆင်းတဲ့ ကိုယ်က မိမိအတွက် ၊ စိတ်ဓာတ်ကို မိမိ ဆန္ဒအတွက် လက်အဖြစ် ဖန်ဆင်းခဲ့တယ်.။
မိုက်မဲရင်း စက်ဆုပ်ရင်းမှာတောင် သင်တို့ဟာ သင်တို့ရဲ့ အတ္တကို အသီးသီး အမှုတော် ထမ်းကြတယ်။အသင်ကိုယ်စက်ဆုပ်သူကြီးတို့..ပြောလိုက်ပါပေရဲ့.။----သင်တို့ အတ္တကလည်း သေလိုပြီး. ဘဝကနေ မျက်နှာ လွှဲရတယ်.။
သင်တို့ အတ္တဟာ အလိုလားဆုံးကို မလုပ်နိုင်တော့ဘူး.။ မိမိကို ကျော်လွန်ပြီး ဖန်ဆင်းပေးလေ…ဒါ သူအလိုလားဆုံးပဲ..။သူ စိတ်အား ထက်သန် သမျှပဲ
ဒါပေမယ့် အခု လုပ်ဖို့ နောက်ကျလွန်းပြီ.။ဒီတော့ သင့်အတ္တက အရှူံးပေးချင်တော့တယ်.။ အသင် ကိုယ် စက်ဆုပ်သူကြီးတို့……။
အရှူံးပေးဖို့ ဒီလို သင့် အတ္တက လိုလားတယ်.။ဒါကြောင့် သင်တို့ဟာ ကိုယ်စက်ဆုပ်သူကြီးတွေ ဖြစ်လာတယ်.။ မိမိတို့ ကိုယ်တိုင်ကို ကျော်လွန်ပြီး မဖန်ဆင်းနိုင်ကြတော့ဘူး.ကိုး….။
ဒါကြောင့်လည်း သင်တို့ ဘဝကို ကမ္ဘာမြေကို အခု စိတ်ဆိုးနေကြတယ်.။မသိစိတ်ထဲက မနာလိုမှုဟာ သင်တို့ ရှုတ်ချမှုရဲ့ ဘေးစောင်း အကြည့်မှာ ပါနေရဲ့..။
ငါက သင်တို့လမ်း မလိုက်ဘူး။ အသင် ကိုယ်စပ်ဆုပ်သူတို့..။သင်တို့ဟာ င့ါအဖို့ မဟာလူသားဆီသွားရာ တံတားများ မဟုတ်ကြချေဘူး.။
ဒီလိုမိန့်ရဲ့ ဇရတုသျှတြ။ ။
ref;Friedrich Nietzsche(Thus spake ZARATHUSTRA)
Labels: မဂ္ဂဇင်း စာစုများ
ပင်လယ်ဆီ အရောက်သွားချင်တဲ့ မြစ်
မွန်းတိမ်း၍ နေစောင်းပြီးနောက် တခုသော ညနေခင်းတွင် ...
ဆောင်းလကုန်လေ၊ နွေသို့ ရောက်၏
ကျွန်တော်နှင့် ငါးထောင်တန် မနက်ခင်း..
ကျွန်တော် သိသော ဖိနပ်များ အကြောင်း
အသစ်(New) နှင့် အင်တာဗျူး..
မူဆယ်မြို့ကို ကြိုဆို နှုတ်ဆက်အပ်သော ကျွန်တော်၏ ပထမ...
ချစ်မြတ်နိုးခဲ့ရသော မိန်းမတယောက်၏ အခြားတဘက်
အစဦး Blog တည်ဆောက်ခြင်း...